UPDATE: Tahriibayaal ku dhintay dooni ku degtay meel u dhow xeebaha dalka Talyaaniga | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Tahriibayaal ku dhintay dooni ku degtay meel u dhow xeebaha dalka...
UPDATE: Tahriibayaal ku dhintay dooni ku degtay meel u dhow xeebaha dalka Talyaaniga
Lampedusa (Halqaran.com) – Inta la ogyahay 9 ruux ayaa geeriyootay kadib markii doon ay saarnaayeen muhaajiriin ay ku degtay meel u dhow jasiiradda Lampedusa, sida ay maanta sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha ee Talyaaniga.
Wararka ayaa sheegaya in 22 qof oo kale ayaa badda laga soo bad-baadiyey.
Doonidan siday muhaajiriinta ayaa rogmatay ayada oo doon ay leeyihiin ilaalada ay isku dayeysay inay muhaajiriinta kasoo qaado meel badda ah oo 10 km u jirta Lampedusa, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay Ilaada Xeebaha.
Ugu dambeyn, hay’adda Qaxootiga u qaabilsan QM ee UNHCR ayaa sheegtay in in ka badan 1,000 muhaajiriin ah ay illaa iyo hadda sanadkan dhinteen, ayaga oo ka isku dayaya inay badda Meditareeniyaanka uga gudbaan Yurub.
muhaajiriin ku dhintay